Kedu otu esi ekpuchi elu ụlọ bat?
Iji chekwaa ọkụ bụ ọrụ kachasị na nwube nke bat . Ime mma ime ụlọ nke ime ụlọ adịghị ezuru iji hụ na ụlọ ahụ na-adabere na nzube ya. Kedu otu esi ekpuchi ụlọ na steam? Ọ dị mfe!
Nyocha nke ihe a tupu mkpuchi
Oké okpomọkụ na-abanye site na ala ụlọ ala na-abụghị nke a na-amanyeghị. Ọtụtụ mgbe, ime ụlọ na-agụnye otu osisi, akwa akwa nke ihe mgbakwasị ụkwụ na ihe ntanetị, na nke a, ha na-egbu egbu. N'uko ụlọ dị ka:
A na-eji ebe a na-agba chaim na-eji ya eme ihe.
N'oge ahụ, site na ime ụlọ dị n'akụkụ ọnụ mmiri, kaadiboodu na mmiri adịghị etinye.
A na-ejupụta ụrọ ọkụ na ụrọ gbasaa ma gbanye n'ime igbe ígwè.
Karịa ikpo ọkụ nke ụlọ ịsa ahụ n'èzí?
Nke mbụ, ịkwesịrị ikpebi ihe ahụ. Anyị na-akwado na-ejuputa oghere na sawdust ihe. Nke a bụ nhọrọ bara uru na nke akụnụba, ebe ọ bụ na ọ bụ ezie na ị ga-emecha gwụchaa, i nwere ọtụtụ osidust fọdụrụnụ. Ya mere, anyị na-eji aka anyị ekpuchi elu ụlọ ahụ.
Na-edozi elu maka ọrụ: jupụta ụfụfụ ụlọ ahụ na ohere ebe wiring gafere.
A na-akwadebe ihe ọkụ ahụ n'ụdị dị otú ahụ: 2 bọket nke sawdust na-aga obere ịwụ nke senti. Tinye obere mmiri mmiri na mix. Cheta na ihe ngwọta ekwesịghị ịgba ọsọ, ka ọ ghara ịdaba n'elu ụlọ osisi n'ime ime ụlọ ahụ.
Ugbu a, a na-etinye ngwakọta na oyi akwa nke na-enweghị mmiri.
Nkịtị ahụ kwesịrị ịdị edo.
A na-enweta okpomọkụ mgbe ụbọchị 2 gachara, mgbe ihe niile dries.
Jiri aka aka gị kpoo ụlọ elu, gbalịa mee ka ị rụọ ọrụ. Ihe a na-atụ aro ọkpụrụkpụ nke mkpuchi - 150 mm, maka oge 1 etinye oyi akwa ihe dịka 50 mm. A ga-ahụ ihe ga-esi na ya pụta mgbe ọ bụla mbụ.
Ihe ọkụ ọkụ ọkụ maka kichin
Olee otu esi ekpuchi elu ulo?
Nlekọta maka TV
Edere akwụkwọ ngebichi maka mgbidi
Ọnọdụ nke ihe ọkụkụ dị n'elu ụlọ
Feng Shui maka ọrụ
Mmekọahụ na kichin - gịnị dị mma?
Obere windo nke nkume
Nkume n'ime ime
Tinye ụlọ n'ime bat
Ogwe ihe ịchọ mma maka mma ime ụlọ
Ụlọ nke nwata
Cape na n'ubu
Uwe na sarafans
Ann Mate Ann Hathaway agaghị aga ajirija na mgbatị ahụ
Chọọchị nke Filip Philip
"Ọ hụrụ m n'anya?" - ịkọ ọgaranya
Inoculation nke apple na a aka ke August
Ụbọchị uri uri uwa
Uru nke vitamin C kwa ụbọchị
Ndị na-eto eto na-egbu onwe ha
Karịa zoo mkpụrụ osisi strawberry maka oyi site na ntu oyi?
Ụta nke atọ ọkụ
Kedu ihe ịrịba ama mbụ nke afọ ime?
Osimiri na ụlọ na aka aka ha
Peter si achịcha pita
Akwa uwe site Angelica Varum
Akwụkwọ nrọ bụ agbamakwụkwọ, gịnị ka nrọ ahụ metụtara agbamakwụkwọ pụtara?
Meadow klova - ọgwụ Njirimara
Oghere maka uwe ogologo ọkpa
Oge ọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ ma mepee onwe ya oge?
Verbena - na-eto eto site na osisi, mgbe a kụrụ ya na seedlings, atụmatụ nke nlekọta